Raha tsiahivina, efa tafaverina amin’ny tompony ireo omby roapolo. Voalazan’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena fa manao ny ainy tsy ho zavatra ny miaramila mampandry fahalemana. Ny faran'ny herinandro teo dia omby 20 no miverina amin'ny tompony vokatry ny ara-dia nataon'ny miaramila ao amin'ny ZRPS BRAVO tao amin'ny tanàna antsoina hoe Behara, kaominina Begidro, Miandrivazo. Namaly tamin'ny tifitra moa ny dahalo ka raikitra ny fifandonana. Vokany, miaramila iray no lavo ary iray hafa kosa naratra ka efa nalefa hitsabo tena eny amin'ny CENHOSOA raha telo tamin'ireo dahalo kosa no lavo. Ny Fianakaviamben'ny Tafika Malagasy dia miaraka ory amin'ny ny fianakavian'ny Sergent-Chef William Daudet. Maro loatra ny mpitandro filaminana maty amin’iny faritra iny, masiaka ny dahalo. Ody gasy miaraka amin’ny tandrok’osy no fampiasan’ireo dahalo. Saron’ny miaramila avokoa ireo ody ratsy ireo.